चिकित्सा शिक्षा ऐन किन र कस्तो? – जनस्वास्थ्य खबर
केदारभक्त माथेमा, डा. अर्जुन कार्की, डा. मदन उपाध्याय, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. भगवान कोइराला
श्रावण १६, २०७४– डा. गोविन्द केसी ११ औंपटक अनशनमा बसेपछि संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक चासो र चर्चाको विषय बनेको छ। सञ्चार माध्यममा पनि बारम्बार यसको चर्चा गर्ने गरिन्छ। तर वास्तवमा यो विधेयक के हो र यो किन आवश्यक छ? यो नआउँदा के फरक पर्छ? यो कसको चासो र सरोकारको विषय हो? कतै यसका विरोधीहरूले चर्चा गर्ने गरेझैं कुनै खास पक्षको निहित स्वार्थ पुरा गर्न वा कुनै अर्को पक्षलाई हानि पुर्‍याउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर आउन लागेको त होइन? यी प्रश्नको सरल उत्तर भने धेरै मानिससँग छैन।